Ultimate General: Yenyika Hondo uye Kuuraya pasi 2 rova ​​iyo Linux nyika | Linux Vakapindwa muropa
Musoro uye hunhu hweizvi zveGNU / Linux zvinoramba zvichikura. Chitoro chaValve, Steam, inoramba ichiwedzera runyorwa rwe mitambo yemavhidhiyo inoenderana neGNU / Linux uye SteamOS iyo yatove padyo neiyo yeMac OS, ichikura zvakanyanya mumakore achangopfuura. Izvo zvakanaka, zvinoreva kuti Linux-yakavakirwa masisitimu pane desktop iri kuve inoremekedzwa uye iri kukwezva kutariswa kwevakawanda uye vazhinji vavaki vemitambo. Izvi zvakare zvine zvazvinoita kune vatambi, vanozonyanya kukwezva kuLinux nyika iyo kusvika makore mashoma apfuura akange akanganwa.
Nhasi tinokuunzira mbiri nyowani pamusoro pemazita maviri, rimwe rawo riri Kuuraya Floor 2, iyo yaunogona kuona turera diki mumusoro wevhidhiyo. Nhau dzekutanga idzi hadzina kunaka, nekuti mutauriri wevanogadzira vazivisa pane yeValve saiti kuti zita racho rakamiswa kwechinguva cheLinux. Zvirinani hakusi kudzima, asi hazvisi izvo zvinofadza kuteerera. Icho chikonzero ndechekuti ivo vakamirira mumwe munhu kuti avabatsire kupedzisa. Kwete zvakawanda zvakawanda parizvino, asi ndinovimba kana Tripwrie ikasangana nemugadziri kana akati wandei, mutambo unosvika munguva pfupi ...
Dzimwe nhau ndedze mutambo wevhidhiyo Pakupedzisira General: Hondo Yenyika. Mushure meimwe jecha, panouya imwe yelimu, iripo, uye yakawanda, isu tinowanzo kusefa mazita matsva uye nhau nezvenyika yevaraidzo yedhijitari yekusaita iyi blog musoro wenyaya, asi kune mablog akagadzirirwa nyika yemitambo yemavhidhiyo. yeLinux inopa iyi mhando yenhau dzezuva nezuva. Uye kana iwe uri muverengi wenguva dzose weLxA, iwe uchaona kuti nguva nenguva tiri kuisa nhau nezve nyika yemitambo yemavhidhiyo, indasitiri ine simba kwazvo inofambisa mari yakawanda kupfuura mimhanzi uye indasitiri yemafirimu.
Zvakanaka, kudzokera kumusoro wenyaya uyo unotifarira, uyu mumwe zano uye matekiniki mutambo wevhidhiyo ichauya kuLinux. Nemashoko akareruka uye akananga kubva kune vanogadzira: "Tichapa iyo Linux vhezheni gare gare" ivo ngativonei kuti vanofarira kutsikisa zita iri zvakare kune penguin chikuva. Yeuka kuti Ultimate General: Gettysburg zvakare yakaburitsa inoenderana neLinux nguva pfupi yapfuura, ikozvino isu tinongofanirwa kumirira zvakafanana kuti zviitwe neiyi iyo inogona zvakare kuwanikwa pane Steam uye mamwe midhiya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Ultimate General: Yenyika Hondo uye Kuuraya pasi 2 rova ​​iyo Linux nyika
Kuuraya pasi 2 zvinonyadzisa, ndinoona zvichishamisa kuti yakabuda windows, uye kwete senge yakatangira (yandakatamba yakawanda) yeLinux. Ndinovimba vanogadzirisa dambudziko nekuti mutambo wakanaka.
Kubata zvakare kune yayo Nhema Chishanu